Jaamacadda Jigjiga University Oo Halis Ugu Jirta Inay Cudurro Ka Dillaacaan Iyo Arday Dhakhtarrada La Dhigay - Jigjiga Online
HomeSomalidaJaamacadda Jigjiga University Oo Halis Ugu Jirta Inay Cudurro Ka Dillaacaan Iyo Arday Dhakhtarrada La Dhigay
Jaamacadda Jigjiga University Oo Halis Ugu Jirta Inay Cudurro Ka Dillaacaan Iyo Arday Dhakhtarrada La Dhigay
Jigjiga (JigjigaOnline) – Jaamacadda Jigjiga University ayaa waxay halis ugu jirtaa inay ka dillaacaan cudurro halis ah oo saameeya ardayda tirada badan ee wax ka barta, kuwaas oo in badan oo ka mid ah ay hoy u tahay oo ay seexdaan.
Jaamacadda Jigjiga University oo ah jaamacadda ugu weyn Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa waxay hoy u tahay kumannaan arday ah oo wax ka barta, kuwaas oo iskugu jira laba qaybood.
Qaybta ugu badan ee ardayda oo iskaga kala yimid gobollada Dawladda Deegaanka Soomaalida iyo deegaamada kale ee dalka ayaa waxay seexdaan gudaha Jaamacadda oo cuntada iyo daruuriyaadka kaleba loogu sameeyo, laakiin waxa jira qaybo kale oo ardayda ka mid ah oo waxbarashada oo kaliya usoo doonta marka ay duruusta dhamaystaana dib ugu laabta magaalada oo ay qoysaskooda iyo ehelladoodu deggan yihiin.
Sida ay Jigjiga Online u sheegeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacaddu, waxa gudaha jaamacadda ka taagan xaalad adag oo dhinaca nadaafadda ah, waxaana kumannaanka arday ee hoyga u tahay ay halis ugu jiraan in ay qaadaan xanuunno halis ah.
Musqulaha (Suuliyada) Jaamacadda oo tiradoodu yar tahay ayaa waxa ka jirta nadaafad darro weyn, waxaana dhex socda dirxi ka dhashay nadaafad xumada, laakiin ardayda oo ay dantu ku qasabtay inay haddana isticmaalaan ayaa sii dhex-qaada Dirxiga siqaya oo kabahooda soo fuula inta ay xaajadooda gudanayaan.
Arrintan murugada leh ayaa waxa sii dheer, in fasalada Jaamacadda ee ay ardaydu wax ku dhigato aan la xaadhin ama la maydhin waqtiyo badan, taasina waxay keentaa in arday soo labbistay oo xarragoonayey uu kasoo baxo fasalka isagoo dabada boodh ku leh iyadoo sababtu tahay in kuraasta aanay cidina masixin muddo dheer.
Waxa kale oo fasallada dhexdooda yaalla waraaqo iyo qashin kale oo halis caafimaad darro sababi kara.
Mar ay warbaahinta Jigjiga Online isku dayday inay la xidhiidho maamulka Jaamacadda ayaanay u suurtogelin, hase yeeshee ardayda ayaa waxay tibaaxeen inay halis ku jiraan.
“Adeer, marka aan guriga ka baxayo ayaan sii dhamaystaa xaajadayda oo musqulaha Jaamacadda laguma hagaagi karayo. Saacadaha badan ee aan joogo wax kaadi ah iskuma dayo sababtoo ah, masqusha waxa dhex socda dirxi. Lama maydho.” Sidaa waxa yidhi Maxamuud Jaamaca oo ka mid ah ardayda dhigata Jaamacadda Jigjiga University.
Asma Xuseen, waxay Jaamacadda dhiganaysay muddo laba sannadood ah, laakiin waxa dhawaan ay gashay dhakhtar kaddib markii ay kalyuhu xanuuneen, waxaana sababta kalyo xanuunka keentay ay tahay in saacado badan ay isku celiso Kaadida maadaama aanay musqusha ku hagaagi karaynin.
“Kalyaha ayaa i fadhiisan gaadhay. Ma waxaad aragtay meel dirxi dhex socdo oo aanad haysanin doorasho kale oo aad uga wareegto. Marka aan guriga kasoo baxayo ayaa iigu dambaysa inaan musqul galo.” Ayey tidhi Asma.
Maxamuud iyo Asma nasiib ayey leeyihiin sababtoo ah, ma seexdaan habeenkii Jaamacadda, waxaanay u hoydaan gurahooda magaalada oo ay qoysaskoodu deggan yihiin, laakiin taas beddelkeeda, waxa jira kumannaan arday oo kale oo ay qasab ku tahay inay musqulahaas isticmaalaan maadaama ay u hoydaan gudaha jaamacadda.
“Marka ay calooshayda wax ku jiraan ma tago suuliga, waayo waan matagayaa. Kaliya marka aan gaajo dareemayo ayaan galaa, laakiin haddii aad aragto sida meeshaasi u egtahay, waxba maad cunteen maalmo badan.” Sidaas waxa yidhi Mustafe Cumar oo sannadkii saddexaad ku jira.
“Maalin iyo habeen waxaan ku fikiraa sidii aan uga bixi lahaa meeshan. Halis ayaanu ku jirnaa.” Ayuu ku daray Mustafe.
Xaaladdan caafimaad darro ee ka taagan ayaa waxay ardaydu sheegeen inay marar badan uga dacwoodeen maamulka sare ee Jaamacadda laakiin aan waxba laga qabannin.
Si kastaba ha ahaatee, Cabashadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Madaxweynihii hore ee Jaamacadda xilkii laga qaaday, si ku meelgaadh ahna loogu wareejiyey ku-xigeenkiisii, isla markaana ay socoto doorashada madaxweyne cusub.